२०२१ मा नयाँ वेबसाइट डिजाइनमा लगानी गर्न Re कारणहरू - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B6B बजार समाचार
मार्च 15, 2021 मार्च 14, 2021 स्टेला राइन अरबी फ्रीलान्स, B2B, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, व्यापार, चीनियाँ स्वतन्त्रता, विशेष समाचार, FGG कम लागत बजार, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, फ्रेन्च फ्रीलान्स गिग, ग्लोबल थोक अनलाइन, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग, प्रविधि, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
यदि तिनीहरू तपाईंको व्यवसायसँग पहिलो अन्तर्क्रियासँग खुशी छन् भने, तपाईंको ग्राहकहरूको आफैंमा फिर्ता आउने २ 27% मौका छ।
व्यक्तिहरू अनलाइन सामग्रीले भरिएका छन्, यसको मतलब यो हो कि यसले उनीहरूको ध्यान बुझ्नको लागि केहि विशेष लिन्छ।
मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू इन्टरनेटमा बहुमत छन् तर डेस्कटप, ल्यापटप र ट्याब्लेटमा अझै उत्कृष्ट रूपान्तरण दरहरू छन्।
एक क्वालिटी वेबसाइटले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँको वेबसाइटमा आएका मानिसहरूलाई तपाइँले के गरिरहनु भएको ठ्याक्कै थाहा हुन्छ।
१. उत्तम एसईओ
तपाईंको श्रोताको ठूलो अंशले तपाईंको आफ्नै व्यवसाय फेला पार्दछ। तिनीहरूले कसरी गर्छन्? खैर, तिनीहरूको खोजमा तपाईंको व्यवसायसँग सम्बन्धित कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गरेर। तपाइँको एसईओ को लागी तपाइँको डिजिटल पदचिह्न लाई असर गर्छ र SEO लाई दुई श्रेणीहरु अफसाइट (लि building्क निर्माण) र साइट मा (तकनीकी SEO) मा विभाजित गर्न सकिन्छ। जब नयाँ वेबसाइट डिजाईन गर्ने वा तपाइँको पुरानो वेबसाइटलाई पुनः डिजाईन गर्ने क्रममा, तपाइँसँग सुरुबाटै तपाइँको एसईओको टेक्निकल पक्ष गर्ने मौका छ। पक्का, एक SEO अडिट कुनै पनि समयमा गर्न सकिन्छ, पूर्ण ओवरहाल बिना पनि। यो केवल सरल र अधिक कुशल यस तरिकामा छ (विशेष गरी जब तपाईं अन्य सबै फाइदाहरूमा तौल गर्नुहुन्छ, तपाईं यसबाट कटनी गर्नुहुन्छ)।
२. प्रयोगकर्ता मैत्री
केही सर्वेक्षणका अनुसार यदि तिनीहरू तपाईंको व्यवसायसँग पहिलो अन्तर्क्रियामा खुशी छन् भने, तपाईंको ग्राहकहरूको आफैंमा फिर्ता आउने २ to% मौका छ। यो धेरै जस्तो लाग्दैन तर दिमागमा राख्नुहोस् कि यो उनीहरूको पुन: अभिवृद्धि नगरी फिर्ता आउने, वफादारी बिन्दुको साथ पुरस्कृत गर्ने वा तपाईंको पक्षमा कुनै पनि किसिमको लगानीको लगानी नगरी फिर्ता आउने मौका हो। अर्को शब्दमा, एक राम्रो अनुकूलित वेबसाइट तपाइँको ग्राहक जीवन चक्र सुधार गर्न को लागी एक उत्तम तरिका हो। समग्रमा, यो एक डिजिटल र अधिक प्रभावी तरीकाहरू मध्ये एक हो तपाईंको डिजिटल मार्केटिंग आत्म-स्थायी बनाउने।
Stand. बाहिर उभिदै
तपाईंले गर्नुपर्ने अर्को कुरा बाहिर पर्नको लागि बाटो फेला पार्नु हो। व्यक्तिहरू अनलाइन सामग्रीले भरिएका छन्, यसको मतलब यो हो कि यसले उनीहरूको ध्यान बुझ्नको लागि केहि विशेष लिन्छ। पछाडि विज्ञहरुका अनुसार ओरियन क्रिएटिभयो तपाईंको ईन्टरप्राइजको ब्रान्डि keyको प्रमुख चरण हो। एउटा चीज सम्झनुहोस्, उचित ब्रान्ड बन्नको लागि, तपाइँ ब्रान्ड मान्यता र ब्रान्ड सचेतनाको चरणहरू पार गर्नु आवश्यक छ। ब्रान्ड मान्यता पहिले आउँदछ र तपाईंको ब्रान्डको दृश्य पहिचान निर्धारणको लागि यो निर्धारणमा महत्वपूर्ण छ।
All. सबै उपकरणहरूमा प्रतिक्रिया
समयहरू परिवर्तन हुँदैछन् र तपाईंले समायोजन गर्ने उपायहरू खोज्नु आवश्यक छ। विगतमा, डेस्कटप प्रयोगकर्ताहरू अनलाइन जनसंख्याको बहुमत थिए तर यो अब त्यस्तो छैन। मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू इन्टरनेटमा बहुमत छन् तर डेस्कटप, ल्यापटप र ट्याब्लेटमा अझै उत्कृष्ट रूपान्तरण दरहरू छन्। यसका साथै, तपाईले उनीहरूको स्मार्ट टिभी मार्फत इन्टरनेट ब्राउज गर्ने व्यक्तिहरूलाई वेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न। अर्को शब्दमा, यी उपकरणहरूको स्क्रीन सबै आकार र आकारमा आउँछ। तपाईंको वेबसाइट डिजाइन रिडु गरेर वा नयाँ वेबसाइट निर्माण गरेर, तपाईं यो प्रवृत्तिको साथमा रहन निश्चित गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँको एसईओ को लागी तपाइँको डिजिटल पदचिह्न लाई असर गर्छ र SEO लाई दुई श्रेणीहरु अफसाइट (लिंक निर्माण) र साइट मा (तकनीकी SEO) मा विभाजन गर्न सकिन्छ।
Qualified. योग्य सीसा उत्पन्न गर्दै
एक क्वालिटी वेबसाइटले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँको वेबसाइटमा आएका मानिसहरूलाई तपाइँले के गरिरहनु भएको ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। यो पर्याप्त डिजाइन मार्फत मात्र सम्भव छ। सबैजना भुक्तानी गर्ने ग्राहक बन्न सक्दैनन् र त्यहाँ केही व्यक्तिहरू छन् जुन केवल तपाईको अफरमा के मा चासो राख्दैनन्। तपाईंको वेबसाइटमा यी व्यक्तिहरूको प्रशस्तता आकर्षण गर्दा तपाईंको बाउन्स रेट बढ्नेछ, किनकि यी मानिसहरू वेबसाइटमा कसरी लामो समय सम्म बस्दैनन्। यसले तपाईंको रूपान्तरण दर पनि कम गर्दछ किनकि तपाईंले के गर्नुभयो, तिनीहरू केहि पनि खरीद गर्ने उद्देश्य राख्दैनन्। एक गुणस्तरको वेब डिजाइनले तपाईंलाई सहि प्रकारको दर्शकहरू आकर्षित गर्न मद्दत गर्दछ।
U. सहज नेभिगेसन
अर्को कुरा तपाईंले विचार गर्नु पर्ने सहज सहज नेभिगेसन हो। यो त्यस्तो चीज हो जुन मानिसहरूलाई सकेसम्म धेरै पृष्ठहरू भ्रमण गर्न प्रोत्साहन दिनेछ। यो पनि उनीहरूको औसत यात्रा अवधि, जो एक रैंकिंग कारक हो वृद्धि होगी। यसले ग्राहकको सन्तुष्टि बढाउँदछ र केहि केसहरूमा तपाईको बिक्रीलाई बढाउँदछ। कसरी? ठिक छ, मान्छेहरूले किन्न सक्दैन जुन उनीहरूले फेला पार्न सक्दैनन्? यदि तपाइँको CTA बटन गलत ठाउँमा राखिएको छ, संभावना छ कि तपाइँसँग पर्याप्त रूपान्तरण गर्नमा गाह्रो समय हुनेछ। याद गर्नुहोस् कि नयाँ वेबसाइट डिजाइनमा लगानीले धेरै स्तरहरूमा फरक पार्छ। अझै, नेभिगेसन मात्र सब भन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मध्ये एक हुन सक्छ।
तपाईंको वेबसाइटले दुई प्रकारका अनलाइन दर्शकहरू प्राप्त गर्दैछ। पहिलो भाग मानव श्रोता हो र दोस्रो भाग खोज ईन्जिन बट्स हुन्। राम्रो श्रेणीकरण गर्न र यसका सबै उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न, तपाईंले यी दुवै दर्शकहरूलाई कसरी अपील गर्ने भनेर पत्ता लगाउनु आवश्यक छ। एक नयाँ वेबसाइट मा लगानी सबैभन्दा साघुँरो नहुन सक्छ तर यो पनी यो स्थिति ह्यान्डल गर्न को लागी सबै भन्दा प्रभावी तरीका हो। यसले तपाईंलाई भविष्यमा अझ बढी प्रभावकारी कामको लागि पनि सेट अप गर्दछ। समग्रमा, नयाँ वेबसाइट डिजाइनमा लगानी गर्ने लगानी हो जुन दिँदै जान्छ।
सांप्रदायिक समाचार डिजिटल मार्केटिङ मार्केटिङ वेबसाइट डिजाइन